Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) });
Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016)
 Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 - 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran jabeessanii fuula dura tarkaanfachiisan dabarseera. Murtiilee dabran hojiitti hiikuuf kan gargaaran dirqamaa fi qajeelfamoota adda addaa KHR-ABOf kennuudhaanis wal gahii isaa milkii fi injifannoodhaan xumurate.
Mooraa QBO daran itichuu fi jabeessuun imaammata dhaabbataa ABOn yeroo hundaa irratti hojjetu dha. Baroota as aanan kana yaaliin gama kanaan godhamu jajjabeessaa tahuu GS hubatee jira. Humna namaa, beekumsaa fi qabeenya Ummata keenyaa wal faana luuccessuudhaan diina keenya irratti tokkummaadhaan qabsaawuun bilisummaa Ummata keenyaa akka shaffisiisu kan wallaalu hin jiru. Waan taheef hojiin gama kanaan itti jiramu akka daran jabaatee itti fufu GS qajeelfama kennee jira. Mootummaan TPLF/EPRDF gaaffii mirgaa ummatni Oromoo fi Ummatootni biroos gaafataniif deebiin kennaa jiru kan diinummaa fi gaaffii karaa nagaa humnaan ukkaamsanii dhaamsuuf kan akeekkate, farra nagaa fi sabatinsa naannichaa akka tahee fi hokkoraa fi jeequmsa naannichatti kan babal’ise tahuun lakkuma buluun hundaaf ifa tahaa dhufee jira. Tarkaanfii diinummaa fi gara jabinaa (faashiistummaa) fudhataa jiruunis akeeknii fi eenymmaan isaa inni dhugaa daran ifatti mul’atee har’aan tana guutummaatti biyyattiin bulchiinsa waraanaa jala galtee jirti. Murni TPLF/EPRDF waggoota as aanan lamaan, addatti ammoo waggaa tokkoo oliif labsii lolaa ifatti ummata Oromoo fi Oromummaa irratti labseen imaammatni sanyi-duguuggaa (genocide) waggoota 25 dabraniif golgaa dimokiraasii kijibaatiin Ummata keenya irratti gaggeessaa ture hawaasa Addunyaa duratti caalaatti saaxilamee jira.
Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Affan Amharan Dubisuuf Astuqii.